Ny boaty varotra Galaxy Note9 dia maneho ireo mari-pamantarana sy endri-tsoratra
Taorian'ny nivoahana androany intro video ny Galaxy Note9, fotoana izao ho an'ny tarehimarika marina sy antsipirihany. Avy any amin'ny boaty varotra ofisialy ho an'ny tsena Rosiana izy ireo. Mankalaza ny zava-drehetra tiantsika hahafantarantsika momba ireo toetra vaovao mampientanentana ny Note9.
Ny Note9 dia manana fampisehoana XHUMX-inch QHD + Super AMOLED izay manamarina izay efa nodinihina fa ny tena zava-dehibe, dia mitonona ny rakitra voafaritra Galaxy S9 +Ny fametrahana fakantsary roa eo an-damosina - 12MP mainty mitovitovy amin'ny aperture (f / 1.5-2.4), Dual Pixel PDAF ary telepony faharoa iray misy ny resolution 12MP ary ny f / 2.4 aperture. Ny camera front dia 8MP amin'ny autofocus.
Araka ny efa nampoizina, ny duo amin'ny fakantsary ao amin'ny efitry ny lasopy dia afaka manoratra horonantsary lahatsary mihetsika ao amin'ny 960fps indroa raha mbola misy ny Galaxy S9 ary S9 +.
Ny lisitra ao ambadiky ny boaty isan-kerinandro dia mitohy amin'ny sariohatry ny remote Control S Pen, 128GB an'ny fitehirizana anatiny miaraka amin'ny 6GB an'ny RAM sy ny batterie 4,000 mAh. Ankoatr'izany, io fitaovana io dia manana mpandahateny stereo sy fanofanana, izay novokarin'ny AKG (na miaraka amin'ny AKG). Ho an'ny fiarovana amin'ny rano, ny Note9 dia manana mari-pankasitrahana IP68 ary ho an'ny fiarovana biometrika, ampiasaina ilay mpandika soratra iris efa fantatra sy ny mpamaky an-doha-printy any aoriana.
Android Marshmallow dia mety hiantso ireo fitaovana samples voalohany ireo
Smartphone Trends 2017: 7 smartphone ho tadiavina amin'ny taona ho avy
Ny Samsung Galaxy A3 (2016) dia manomboka ny fiarovana ny ordinateran'ny Oktobra
Ny Snapdragon manaraka an'i Qualcomm dia tsy ny 8150
Inona no mampidi-doza amin'ny Samsung Galaxy Note 7? Nipoaka ny rivodoza 6-taona rehefa nanolo-tena i Korea Atsimo.
Samsung Galaxy Note 7 Iris Scanner: 6 Ireo Zavatra Hanamboatra Ny Asa Fanaovana Biometrika Tsy Manasa
Samsung Galaxy A7 (2017) dia nahazo mari-pankasitrahana WiFi
Ny finday goavana, indrindra fa ny singa
Misaotra ny fizarana ity vaovao ity
Instagram dia nanomboka nanova ny endriky ny Time Screen toa anao amin'ny asany
Ankehitriny dia efa nanamafy fa mihemotra ny iPad Pro, fotoana izao ny manakana ireo fitsapana tsy misy dikany
Dark GMaps, SmartTap X, TwitterLabs, ary jailbreak hafa hanakanana ity faran'ny herinandro ity
Afaka mahazo mpikambana 12 volana PlayStation Plus ianao amin'ny $ 40 amin'izao fotoana izao
Ubuntu nbsp web server haino aman-jery sosialy fanamarinana Ubuntu 14.04 Windows Phone 'App Command PDG Plugin OS X Up " ram Twitter windows update takelaka fikirakirana Phone lalao Android Plugins Rafitra fikirakirana MAMAKA Unix Linux Ubuntu Systems tahirin-kevitra fitaovana finday bilaogy USB rindrambaiko paoma Chrome toe-tsaina HTTPS Bing SSD rafitra Screen ubuntu 15.04 Ubuntu 16 Malagasy Bible GNOME Firefox File Database Server "PC Unité centrale taona Support PHP afa-po Debian bilaogy Ubuntu 14.10 Users Windows SSH One ' Microsoft Windows MySQL web browser SEO Apache raki-daza 10 famotsorana Samsung fitaovana hametraka finday avo lenta 04 famerenana loharano misokatra Company Cortana endri-javatra Facebook Microsoft Ubuntu (rafitra fandidiana) app store Apple Watch command line Windows 8 HTTP vaovao farany Linux YouTube iPhone Samsung Galaxy fikarohana IP adiresy PPA Google fitaovana Toetoetra CentOS 7 Linux Mint WordPress lalao Apps fitaovana Video Windows 10 Fitaovana finday Time fifamoivoizana CentOS Nginx HTML API